Uyeke ubuthisha, wangena ebhizinisini lokufuya nokulima. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNksz u-Ipeleng Kwadi, oneminyaka ewu-29, uqale wafundisa iminyaka emine ngaphambi kokuthatha isinqumo sokushiya ubuthisha ukuze agxile ebhizinisini lokufuya nokulima, iMotshotelo Farming Enterprise.
UNksz uKwadi uneziqu i-Bachelor of Education yaseNorth West University, aziphothula ngo-2016. IMotshotelo, esungulwe ngo-2019, ilima amaveji, ifuye izinkomo, izimbuzi nezinkukhu.
Elanda ngokungena kwakhe kulo mkhakha, uthi ukhulele emndenini obugxile kwezolimo njengoba abazali bakhe bengabalimi.
“Ngikhuliswe abazali abebevele begxile kwezolimo lokho okwenza nami ngakhula ngikuthanda ukulima nokufuya, okwenze ngashiya phansi ubuthisha ngoba sengifuna ukugxila entweni engikhule ngayo nengiyithandayo,” kulanda yena.
UNksz uKwadi kudedangendlale wepulazi leMotshotelo
Emhlabeni ongamahekthare awu-15 awulimayo ukhiqiza iklabishi, ispinashi no-beetroot kanti maduze uzokwengeza i-butternut nekhabe.
Ufuye izinkomo, izimbuzi nezinkukhu. Uthi ukuswela amakhasimende ezingulube, agcina eyeka ukuzifuya, nokuthwala kanzima ukulondoloza imali ngezinye zezingqinamba ake wabhekana nazo ebhizinisini.
Kumhlophe wu izinkukhu zekhethelo
“Ngagcina ngiphoqeleka ukuthi ngiyeke ukufuya izingulube ngoba ngangingenzi mali ngazo. Amakhasimende azo ayeyindlala kakhulu, okwangenza ngabona kungesiwo umqondo omuhle ukuqhubeka nokuzifuya,” kusho uNksz uMotshotelo.
Ngemva kokuhlukana noshoki nebhodi, uthi iyamthokozisa indlela imfuyo yakhe eyanda ngayo nendlela okuhamba ngayo ezitshalweni.
Uqashe izisebenzi eziyisithupha ezisebenza ngokugcwele nezinhlanu eziyitoho.
UNksz uKwadi, wesibili kwesobunxele, nezinye zezisebenzi zaseMotshotelo
Uthi ukuba wusomabhizinisini kumfundise ukubalukeka kokubekezela, ukungasheshe uzitshele ukuthi usuphumelele, umqoka bokuxhumana nobudlelwano obuhle nabantu.
Ululeke abafisa ukuqala ibhizinisi ukuthi benze ucwaningo ngebhizinisi abafuna ukuliqala bese besebenzisa okuncane abanakho ukuqala.
“Okunye futhi wukuthi bangesabi ukwenza amaphutha ngoba iwona akhulisanayo uma ufuna ukudlondlobala kwezamabhizinisi,” kweluleka yena.
Uthi ufisa iMotshotelo igcine isidayisa imikhiqizo yayo kwamanye amazwe.
“Ngisafuna ukukhula kakhulu nje kule ndima ngigcine sengikhiqizela amanye amazwe imikhiqizo yami,” kuphetha uNksz uKwadi.
Facebook: Ipeleng Kwadi